မူလစာမျက်နှာ - Hands Off!
ကြိုဆိုပါတယ် အပေါ် လက်လျှော့ - ကလေးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုရပ်တန့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများမှကာကွယ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့ပြီးကလေးများကိုကာကွယ်တားဆီးလိုသူအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်တွင်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောသတင်းစာဆောင်းပါး ၅၀၀၀ ကျော်ပါရှိသည်။
ကလေးများနှင့်လူကြီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာများ၊ pedophile၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော၊ ပညာရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုပါ ၀ င်စေလိုသည်။
ဇန်နဝါရီလ 2021 ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အသက် ၃ နှစ်မှ ၇ နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုပြုစုနေသည်။ ဤစာအုပ်သည်ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘများသာမကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကလေးများနှင့်အလုပ်လုပ်သူအားလုံးနှင့်ဆရာများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။
သူငယ်တန်း ၅၆၀၀၀ နှင့်ဂျာမနီရှိနေ့စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် ၁၅,၀၀၀ နှင့်သြစတြီးယားတွင်ကလေးငယ်တစ်သန်းကျော်သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်သည်။ ဂျာမန်စကားပြောသောနေရာတွင်မူလတန်းနှင့်မူလတန်းကျောင်း ၂၅၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးပထမတန်းတွင်ကျောင်းသား ၆၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည်လည်းပညာသင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေနိုင်သည် www.leoloewe.com ဖြစ်သည် စာအုပ်စီမံကိန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ။
မာ့ခ် C. Riebe ။
လှူဒါန်းမှုအားလုံး၏ ၉၅% သည်ကလေးသူငယ်များကိုတိုက်ရိုက်သွားသည်
$ 15,000 ထမြောက်တော်မူ
ရည်မှန်းချက် $ 150,000
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများသာမကအရွယ်ရောက်သူများသာမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့်အပြင် pedophile၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးကျူးလွန်သောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုအချိန်မှီအသိအမှတ်ပြုပြီးသင့်လျော်စွာတုန့်ပြန်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီချင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းအားပြောဆိုရန်အခွင့်အာဏာရှိရမည် (သို့သော်၎င်းကိုသတိပေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာ vigilante တရားမျှတမှုတစ်ခု option ကိုမဟုတျကွောငျးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာရှိပါက ၄ င်းတို့သည်ကြံရာပါသို့မဟုတ်အပြစ်ပေးနိုင်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုသင့်သည် သို့သော်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအာဏာပိုင်နှင့်ရဲသို့အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါ wird ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူ Hands Off ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်၏အတိုင်းအတာကိုဂျာမနီ၊ သြစတြီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊
ရုပ်ရှင်စီးရီး "စစ်ဆင်ရေးသကြား"မင်းသမီးမင်းသမီး Nadja Uhl (သို့) ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ"အမဲလိုက်ပွဲ"စိန်ခေါ်မှုများကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အဓိကတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ဂျာမန်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီး Thomas de Maizièreတွင်စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်"Saxon ရွှံ့ARD မီဒီယာစာကြည့်တိုက်များမှဖျက်ပစ်ရန်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲ panel ကိုဆွေးနွေးမှုအတွက် 20:15 p.m. မှာပြသခဲ့သည် စန်ဒရာ Maischberger အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ UBSKM မှ Wilhelm Röhrigကသူသည်ကလေးငယ်များ၏သတ်ဖြတ်မှုကိုလည်းသတိပြုမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အချက်အလက်, အချက်အလက်, အဖြစ်မှန်
တစ်ဘီလီယံ DOLLER စီးပွားရေး
ကလေးသုံးသန်းကျော်သည်လက်ရှိတွင်သုံ့ပန်းဘဝရောက်နေရသည် (မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ကလေးများ၏အလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်များနှင့်၎င်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်သောဗွီဒီယိုများထောက်ပံ့ပေးသောလုပ်ငန်း ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံ (ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိသောအမှုပေါင်းများပြားလာသင့်သည်) ကိုညှစ်ထုတ်ရမည်။
နေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပျက် - ကျွန်ုပ်၏MYရိယာအတွင်းတွင်မပါ။
လူအများစုကဒီဟာကိုယုံကြ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းများသည်မတူညီသောဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။ ကလေးသူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုသည်ငါတို့ထဲမှဖြစ်သည်။ ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မလိုလားအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစကားပြောခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်စေတဲ့အတိုင်းအတာတခုအထိကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အားပေးသင့်သည်။
ဂျာမနီမှာတရားဝင်ရှိပါတယ် 15,000 ကလေးအလွဲသုံးစားမှုကြော်ငြာသို့သော်အစီရင်ခံခြင်းမရှိသောအမှုပေါင်းအရေအတွက်သည်များစွာမြင့်မားသည်။ WHO ကခန့်မှန်းသည်မှာ၎င်းသည်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည် တစ်သန်းခန့် ဂျာမနီနိုင်ငံရှိမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကိုထိခိုက်ခဲ့လျှင်၊ သန်း ၁၅၀ ဥရောပရှိကလေးများနှင့်လူငယ်များ။
ဂျာမနီရှိကျောင်းတိုင်း၌ထိုင်ပါ 1-2 ကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။
အကြောင်း အမှုပေါင်း ၁၀ ခုအနက် ၉ ခု ကလေးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုမတွေ့ရှိရ
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ 80-90% ရှိပါတယ် အထီး၁၀-၂၀% အမြိုးသမီး.
ဤသို့လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းသည် Thorn.orgDemi Moore နှင့် Ashton Kutcher တို့ကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် မြေအောက်ရထားလမ်းစစ်ဆင်ရေး တိ Ballard အားဖြင့်ငါတို့ကလေးငယ် ၁၃၀၀ ကျော်ကိုသုံ့ပန်းနှင့်အခြားကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှအိမ်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစကန့်သတ်ချက်များ၏ပြဌာန်းချက်နောက်ကြောင်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုခံစားခဲ့ရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျားတိုင်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမညှဉ်းဆဲသူအားအစီရင်ခံရန်အခွင့်အရေးရှိသင့်သည်။
အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားလုံးကို Interpol၊ BKA သို့မဟုတ်အခြားအာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့ပြီး၎င်းတို့မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ယခုအမှု၏ ၁၀% အောက်သာလုပ်ဆောင်သည်။ ဒီအဘို့, ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်းဥပဒေများကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြောင်းလဲသွားသည်, ဘာအတွက်လဲ နိုင်ငံရေးကိုတောင်းဆိုသည် တူညီသောဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်များသက်ဆိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ပြစ်ဒဏ်များကိုချမှတ်နိုင်သေးသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ဆိုင်ရှင်တစ် ဦး သည်အနိုင်ကျင့်သူထက် ပို၍ ပြင်းထန်သောအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။
ပိုလန်၌တည်၏ မသင်မနေရဓာတုဒြပ်စင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်အစွန်းရောက်ပုံရသော်လည်းကျူးလွန်သူအားလုံး၏အနည်းဆုံး ၅၀% ကျော်သည်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်။ ဤတွင်ဤနေရာတွင်လည်းနိုင်ငံရေးသမားများအားထိန်းသိမ်းရေးသို့မဟုတ်ကုထုံးပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်လျော်သောအတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်တောင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည့်နိဂုံးချုပ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖန်တီးမှုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။Amber သတိပေးချက်“ ဒါကြောင့် US မှာလိုပဲပြန်ပေးဆွဲမှုတိုင်းကိုသတင်းပို့နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်နှိုးစက်နှင့်ပြန်ကြားခြင်းအချက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်ပေးဆွဲသည့်နေရာနှင့်လူအများကြားရှိမိုဘိုင်းဖုန်းတိုင်းတွင်ပြသသည်။ ၎င်းသည်ကလေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ပြန်ပေးဆွဲသူ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ဥပမာလိုင်စင်ပြား) နှင့်အတူပေါ်လာသည်။
သင်၏လှူဒါန်းမှုများ၏ ၉၅% သည်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသို့တိုက်ရိုက်သွားသည်။
© 2021 လက်များ-off.org ။ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။